IiFom zabaPhathi beeNqanaba: ii-Checklists kunye ne-Sign-In Sheets
Ukuphinda uhlaziye iphepha lokungena ngemvume
Ifayile yokungena ngemvume yeReahearsal. © Angela D. Mitchell
Olu phepha lokungena ngemvume lokulungelelisela ukulungelelanisa lwenza kube lula kubaphathi bezithuba ukuba baqalise kwaye basebenzise ukungena ngemvume ngokugxothwa kunye nabasebenzi kuzo zonke izinto zokufunda, nangakumbi kwimveliso encinci.
Leli phepha aliniki nje kuphela imbali ebhaliweyo yokuhlaziya umphathi wesigaba kunye nomqondisi wokuphononongwa kwemveliso emva kokuvelisa, kodwa ibuye ibambe amalungu aphikisanayo kunye nokubonisana ngexesha.
Iifom ezigqityiweyo mazigcinwe ndawonye kwi-binder okanye ifolda ukuze umphathi wesigaba angabuyela kumlawuli kunye nomvelisi kwi-castmember attendance. Emva kokuboniswa kwee-wraps, iifom zifanele zigcinwe kwi-archived, ezo ziza kubakho ngokukhethekileyo ekusebenzeni izigqibo ezizayo malunga nokugcina ixesha nokuhamba.
Iphepha lokungena ngemvume kwiNtsebenzo
Iphepha lokungena ngemvume. © Angela D. Mitchell
Iphepha lokungena ngemvume lokusebenza liya kukuvumela ukuba ubhalise kunye nokugcinwa kwengqolowa ngokuhamba kunye nabasebenzi kuyo yonke imisebenzi. Ukuba ilungu le-cast and crew not to attend or delayed to the performance, umphathi wesigaba makaqwalasele ngokukhawuleza kweli phepha, fowunela iqela okanye umntu osebenzayo, uze uqaphele ukunyaniseka.
Ngenxa yeso sizathu, ukuxhomekeka kwimiqathango kubalulekile ukuphawula kule fayili yokuhamba. Kwimeko apho ilungu elilahlekileyo lilahlekile, umphathi wesigaba angakujonga eli phepha kumlawuli kwaye amenze azi ukuba zeziphi izinto ezikhoyo kwisayithi ukuze zenze inxaxheba.
Ukugcinwa kweengxelo zokugcinwa kwezinto ezingabanjwanga kwimisebenzi kubaluleke ngakumbi kunokuba wenze okufanayo ukuze uhlaziye. Abadlali kunye nabasebenzi kufuneka bangaphuthelwa kwintsebenzo, nokuba ngaba baxhomekeke phantsi, kwaye abalawuli bayakuxabisa ukuba uyazi ukuba umntu ophicothayo kwiimbonakalo zabo ezilandelayo ulahlekile ukusebenza nabo kwixesha elidlulileyo.
Uluhlu lokuphinda uhlaziye. © Angela D. Mitchell
Ifom ecacileyo, elula kunye neenkcukacha zokuphonononga ngokucacileyo ukuncedisa abaphathi bamagosa bafezekisa imisebenzi efunekayo nganye.
Izinto kwi-checklist ziquka imisebenzi yolawulo olufana nokuvula indawo yokuhlaziya kunye nokujonga kumalungu aphangiweyo kodwa kunye neenjongo zokubamkela izihambi ezifana nokusetyenwa kunye nokusela okugqithwe kunye nabasebenzi.
Ukuqinisekisa ukuba into nganye kuloluhlu ichongiwe iya kunceda abaphathi beendawo baphumelele ukuhlaziya ngokugqibeleleyo kwaye bashiye indawo yokuzonwabisa okanye bahlaziywe indawo ecocekileyo kwaye bahlaziye ngexesha elizayo.
Ifom yoHlola lokuSebenza
Ifom yokuhlola yokusebenza. © Angela D. Mitchell
Iifom ezinjengeloluhlu lokuhlola uluhlu lunokunceda abaphathi bamagosa ukuba bahlale behlelekile kwaye bajolise ngexesha elide ngaphambi kokuba ikhefu likhuphuke, ukuqinisekisa ukuba yonke into ikhona kwindawo efanelekileyo kunye nabasebenzi kunye nabasebenzi banakho konke okufunekayo ukubeka umboniso omkhulu.
Ukuqala ngokufika kwisiza, olu luhlu lokuhlola olulungileyo lunikeza inqanaba lesinyathelo-nyathelo kubaphathi bezithuba ukuqinisekisa ukuba abazange baphoswe iinkcukacha, ezinkulu okanye ezincinci, ngezidingo zeemveliso.
Emva kokuba iipalini zivale, uluhlu lokutshekisha luqhubeka luluhlu lwezinto ezifunekayo zenziwe ukuze kuqinisekiswe ukuba indawo yokudlala ikulungele ukusebenza okulandelayo.
I-Cast Cast ifom yokuQhagamshelana neCrew
Ifom yoqhagamshelwano lokuvelisa. © Angela D. Mitchell
Le fom ebanzi kunye ne-crew ifomu yolwazi luya kunika zonke iinkcukacha ezifunekayo kunye nolwazi olusisiseko lwezonyango oluya kulufuna kumalungu akho kunye nokusebenza kwakho. Iifom ezigqityiweyo kufuneka zonke zigcinwe kwifolda enye okanye ibhinqa ngemveliso nganye.
Nangona ukuba amalungu kunye nabasebenzi bafaka inxaxheba kwimveliso emininzi phantsi kolawulo lwenqanaba lakho, kufuneka bazalise ifom yeenkcukacha ezisisiseko ngasinye xa bephoswe okanye bajoyine abasebenzi bokuvelisa umboniso omtsha.
Umphathi wesigaba kufuneka kwakhona aqoke iphepha loxwebhu olulodwa, olubizwa ngokuba ngumshicileli wecingo, kunye negama nje lelungu okanye umntu osebenzayo, inombolo yakhe yefowuni nenxaxheba yakhe kwimveliso. Eli phetshana lokufowunelwa kufuneka liqhotyoshelwe njengephepha lokuqala lolawulo oluqulethe zonke iifom zoqhagamshelwano ezizalisiweyo.
Ziziphi iibhola ezakhiwa nguTchaikovsky?
Regime, Regimen, kunye neRegiment
Kutheni ULwandle Oluhlaza?
I-Christmas Eve Quotes Iphilisa uMoya woKhisimusi
Indlela yokufunda i-Guitar Tablature